HomeWararka CiyaarahaManchester City oo Raaligelin ka bixisay Weerarkii ay Taageerayaashu ku Qaadeen Aston Villa Robin Olsen
Manchester City ayaa raaligelin ka bixisay Aston Villa ka dib markii goolhayaheeda Robin Olsen lagu eedeeyay in la weeraray ka dib markii lagu soo duulay garoonka kulankii ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedka Axadii.
Citizens ayaa sii xajisatay horyaalka Premier League ka dib markii ay labo gool iyo gool kaga badisay Villans ciyaar ka dhacday Etihad Stadium.
Matty Cash iyo Phillipe Coutinho ayaa Villa u kala dhaliyay labo gool, laakiin labo gool oo uu dhaliyay Ilkay Gundogan iyo gool uu dhaliyay Rodri ayaa u xaqiijiyay City koobkeedii afaraad ee Premier League shan xilli ciyaareed gudaheed.
Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii la afuufay seeriga buuxa, madaxa Villa Steven Gerrard ayaa sheegay in Olsen “la weeraray” intii lagu jiray duullaankii garoonka.
Markii la waydiiyay shirkiisa jaraa’id ee ciyaarta kadib in ciyaartoydiisu ay si nabad ah garoonka uga baxeen iyo in kale, Gerrard waxa uu yidhi: “Maya jawaabtu taas waaye, goolhayahayga waa la weeraray, marka waxaan qabaa in su’aalahaas ay aadayaan Pep [Guardiola] iyo Manchester City”.
Citizens ayaa tan iyo markaas soo saartay bayaankan soo socda: “Manchester City waxay jeclaan lahayd inay si daacad ah u raali geliso goolhayaha Aston Villa Robin Olsen, kaasoo la weeraray ka dib seerigii ugu dambeeyay ee ciyaartii maanta markii ay taageerayaashu soo galeen garoonka.
“Kooxdu waxay bilowday baaritaan degdeg ah, marka la ogaado, shaqsiga mas’uulka ka ah waxaa la soo saari doonaa ganaax aan xad lahayn oo garoomada.”
Tani waa dhacdadii afaraad ee aan wacnayn lixdii maalmood ee la soo dhaafay oo ka dhacda kubada cagta Ingariiska ka dib markii garoomo lagu soo duulay.
Taageere Nottingham Forest ah ayaa xabsiga la dhigay ka dib markii uu qirtay dambiga ah in uu weeraray weeraryahanka Sheffield United Billy Sharp Talaadadii, ka dib markii garoonka ay ku soo duuleen taageerayaasha Forest oo u dabaaldegayay guushii ay ka gaareen semi-finalka isreebreebka Championship.
Kaliya laba maalmood ka dib, maamulaha Crystal Palace Patrick Vieira ayaa isku dhacay taageere Everton ah garoonka Goodison Park, halka ciyaartoyda Swindon ay soo gaareen dhaawacyo ka dib markii ay isku dhaceen daawadayaasha ka dib guuldaradii rigoorayaasha ee Port Vale ee semi-finalka League Two.